मत खसाल्दा विवेकको प्रयोग गरौँ - Ratopati
- बाबुराम पन्थी
नेपालको राजनीतिका बारेमा नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्म चिरपरिचित नै छौँ । पटक पटक व्यावस्था परिवर्तनका लागि हजारौँ मानव बलि चढिसकेको र नेपालको समग्र राजनीतिले जनचाहना अनुसारको विकासमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेको छैन । यसको पछाडि हाम्रो समाजमा व्याप्त दूषित राजनीति नै मुख्य कारक हो भन्ने कुरामा तपाईं हामी स्पष्ट छौँ ।
नेपालको राजनीति विश्लेषणमा थुप्रै लेखकले सधैँ लेखिरहेका छन् । तर पनि पत्रकारहरु कुनै न कुनै कारण स्वतन्त्र रूपबाट आफ्ना विचार लेख्न र जनतासामु प्रस्तुत गर्न डराएको देखिन्छ । यो कुरा दैनिक जीवनमा देखे भोगेबाट थाहा हुन्छ । तपाईले जे देख्नु भएको छ मैले पनी त्यही नै देखेको र भोगेको छु । यहाँ कुनै पार्टीलाई गाली गलौज गर्ने पक्षमा म छैन । सम्पूर्ण पाठक वर्गसमक्ष केही कुरा राख्ने जनर्को गरेको छु ।
हामी नेपाली जनता के प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे सहिद बन्नुपर्ने ? कसको लागि सहिद बन्नुपर्ने ? यो हामी सबैको साझा समस्या हो ।
आजको युग एक्काइसौँ शताब्दीको युग हो । यसर्थ हामी जनता राजनीतिप्रति सचेत हुनु जरूरी छ । मेरो हजुरबुबा, बुबा, म र मेरो छोरा छोरीसम्म आइपुग्दा सिङ्गो चार पुस्ता बितिसक्यो । आन्दोलन नै आन्दोलन र सहिदै शहिद बन्नुपर्ने हामीले ? हामीले किन यो दुखद घडी पटक पटक व्योहोर्नु परेको छ ? तपाईं नेतालाई दोषी देख्नुहुन्छ होला तर त्यसो होइन । हामी जनता नै जिम्मेवार नभएको कारण देशको यो दुरावस्था आएको हो । हजुर बुबाबुबा, मेरो र छोरा छोरीका पालामा नेता उनै छन् । राजनीतिको प्रमुख ओहोदामा उनीहरु नै छन् र हामी पटक पटक तिनै नेतालाई भोट दिएर जिताउँदै आएका छौँ । तसर्थ किन तत्तत् का नेतालाई चुनावमा भोट दिन्छौँ ?
हामी जनताले बुझ्नै पर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निर्वाचन भनेको नयाँ नेताको जन्म हुने पद्धति हो । जबसम्म नयाँ अनुहार युवा अनुहारहरू समयअनुसार राजनीतिमा देखिँदैनन् । त्यही राजनीतिक चक्रव्यूहमा हाम्रो देश फसेको छ ।
सबैले भन्दछन्, कुनै पार्टीले राम्रो काम गरेको छैन तर मेरो बुझाइमा राम्रो र नराम्रो पक्ष जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । अध्यावधिक चुनावमा सहभागी गराउनुको कारण पनि के हो भने तपाईंले राम्रो छवि भएको जुनसुकै राजनीतिक सिद्धान्त बोकेको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नुस्, बा, आमा, दाजु, भाइ, साथी सङ्गति कसैले भनेको आधारमा मतदान नगर्नुस् । तपाईंसँग भएका उम्मेद्वारहरूमध्येबाट इमानदार छवि देखिएका नेतालाई मतदान गर्ने गर्नुस् । किनभने मतदान केन्द्रको बुथभित्र तपाईंले कसलाई चुन्नुभयो भनेर कोही हेर्न जाँदैन । त्यो नै तपाईंले निर्वाध रूपले राष्ट्र निर्माणमा विनाअवरोध आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर हो । त्यो अवसरलाई कसैको बहकाउमा नलागी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
आँउदै गरेका तीन चरणका निर्वाचनमा तपाईं हामीले बढो बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले मतदान गर्नु पर्छ । यसो गरिएन र ह्विपको भरमा कुनै पार्टी विशेषलाई मतदान गर्यौं भने हामीले फेरि देशलाई चक्रव्यूहमा फसाउने छौँ । यस राजनीतिक चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन सक्ने छैनौँ, हाम्रो जीवन कालमा समृद्ध नेपाल बन्ने सपनाको त कुरै छोडौँ, हाम्रा सन्ततीको पालासम्म पनि यस्तै लगामबिनाको राजनीति चलिरहनेछ ।
त्यसैले आगामी चुनावमा निकै संयमित र बुद्धि विवेक प्रयोग गरी चुनावमा मतदान गरौँ । त्यस्तै तपाईले जुन पार्टीलाई मत दिनुहुन्छ समानुपातिकमा पनि उसै पार्टीलाई मत दिनुहोस् । यसो भयो भने मात्र कुनै पार्टीको बहुमत आउन सक्दछ । जसको कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुनेछ र देशले विकासमा अग्रगति लिने छ ।